चुन्काईलाई किन छनौट गर्नुहोस्？
किन हामीले कारखानाबाट बिक्री छुट्याउन आवश्यक छ? यद्यपि यो निर्णय केही गडबडी भएको छ, हाम्रो सुरूवात विन्दु यो हो कि हाम्रा ग्राहकहरूले राम्रो महसुस भएको ठाउँमा हाम्रा उत्कृष्ट सेवाहरूको अनुभव गर्नेछन्।
बायोडिग्रेडेबल र पुन: प्रयोज्य प्याकेजिंग सामग्रीको प्रकार
भाग्यवस त्यहाँ धेरै बायोडिग्रेडेबल र रिसाइक्लेबल प्याकेजिंग सामग्री विकल्प उपलब्ध छन्। यसले समावेश गर्दछ: कागज र कार्डबोर्ड - कागज र कार्डबोर्ड पुन: प्रयोज्य, रिसाइकल गर्न योग्य र बायोडिग्रेडेबल। यस प्रकारको प्याकेजि product उत्पादनमा त्यहाँ थुप्रै फाइदाहरू छन्, न कि वास्तवमा तिनीहरू ...
कस्टम प्याकेजिंग बक्सहरूको छनौट किन महत्त्वपूर्ण छ?
कसैले पनि पहिलो हेराईमा चीजहरू देख्न सक्दैनन्। यो बाहिरी आकार वा रूपरेखा हो जुन तपाईंको आँखा अगाडि आउँछ। यदि यो उपस्थिति वा लेआउट ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्दछ, तब तिनीहरूले निश्चित उत्पादन किन्नेछ, अन्यथा, तपाईंको बजार शेयर हानि। यदि उत्पादन प्याकेजि boxes बक्सहरूको प्राथमिक दृश्य असफल भयो भने ...
विभिन्न आकारमा उच्च गुणवत्ता पिज्जा बक्स
उच्च-गुणवत्ता नालीदार पिज्जा बक्से हामी नालीदार स्टॉक पिज्जा बक्सहरूको एक विस्तृत लाइन निर्माण गर्दछौं जुन विभिन्न आकारमा आउँदछ। हामी custom-50० स्टोरहरूबाट चेन स्टोरहरूको लागि अनुकूलित मुद्रित पिज्जा बक्सहरूमा पनि विशेषज्ञ गर्दछौं। हामीसँग साना रनहरूको पनि क्षमता छ। हामी सुविधा अर्डर गर्न बनेका छौं र ...